Abe-ANC bajijimezana ngamagama asohlwini | Bayede News
Bayede News Latest
UMaDlamini angaba yihawu nogange lukaRamaphosa
Kuvotwe nemfucuza kube kungenamanzi
Awukangeni ngokwanele owegalofu
Abekhilikithi bahlahlameliswe yiSILO bathola nezeluleko ezinqala
Amaqembu amancane abezibambe zaqina
Idangabane elinguWoods livuke qingqo
Ukubaluleka nobumqoka bukamama kithina
Amacala angaya nanini kwezinye ezinkantolo
Home/ Ipolitiki/Abe-ANC bajijimezana ngamagama asohlwini
Abe-ANC bajijimezana ngamagama asohlwini
ABAHOLI abadala beqembu elibusayo sebethembele kwiKhomishini Ebhekele ukuziphatha kwamalungu ngokuthi izowaphendulela ngokuthi kukhishwe abantu abathile ohlwini lwabazoya ePhalamende nakuSishayamthetho.
IKhomishini ebhekele ukuziphatha kwamalungu ephenya labo abahlaze iqembu isithathwa ngokuthi ayinamandla futhi ifana nenja engenamazinyo. Kuthiwa kunamanye amalungu angayishayi ndiva imiyalelo yale Khomishini abangafuni nokuvela phambi kwayo uma bebiziwe. Ukubuyekezwa kohlu lwamagama okumele bamele i-ANC ePhalamende siqale ukushuba emuva kwesinqumo sesigungu esiphezulu sale nhlangano iNational Executive Committee (NEC) sokuba uhlu lonke lwamagama luyiswe kwiKhomishini ukuze lucutshungulwe.
USihlalo we-ANC uMnu uGwede Mantashe uthe iKhomishini ezophuma nezwi lokugcina ngokuthi ngobani okumele bahoxe ohlwini. “Le Khomishini iyona okumele yenze izinqumo ngokumele bahoxe, kodwa isinqumo sayo akumele kube ngesithatha ngoba nakhu inengcindezi evela kwabezindaba,” kusho uMantashe.
IKhomishini Ezimele Yokhetho ithole izikhalo ngamagama angama-30 asohlwini lwe-ANC abaya ePhalamende naseSishayamthetho ashayisa amakhala. UMantashe uthe okunye okuvelile izikhalo ngegama lakhe lapho abantu beveze ukuthi indlela asingethe ngayo udaba lwaseXolobeni e-Eastern Cape lapho umphakathi uhlukene phakathi ngodaba lwemayini ayamukelekile.
NgoLwezi wezi-2018 iNkantolo iNorth Gauteng yavuna abantu baseXolobeni abaphikisana nemayini yase- Australia yetitanium. Le nkampani ibizwa ngeTransworld Energy and Mineral Resources (TEM).
Omunye ongaphakathi eqenjini uthe amathemba abo sebewabeke kwiKhomishini ukuba isuse bonke abanogcobho, okuhlanganisa namalungu aphezulu okwatholwa ukuthi aphula umthetho ngokuthinteka kwamagama awo ekugwamandweni kombuso. Phakathi kwabo kukhona uNkk uBathabile Dlamini, uMnu uMalusi Gigaba, uMnu uMosebenzi Zwane, uMnu uNomvula Mokonyane kanti muva nje sekuvela negama likaMantashe.
Umthombo ongaphakathi uthi sebethembele kakhulu nasohlelweni lokucubungulwa kwamagama lweKhomishini Ezimele Yokhetho, ukuba kususwe amagama athile. Omunye uthi kukhona ukuhudula izinyawo kwamalungu athile ekukhankaseleni iqembu kuze kube kulungiswa indaba yamagama anogcobho. Ngeledlule iphephandaba iSunday Times libhale ukuthi kunomshoshaphansi wokushiya ngaphandle owayenguMengameli uMnu uJacob Zuma KwaZulu- Natal njengoba kunemikhankaso yokhetho ye-ANC okuwumyalelo kaMengameli uCyril Ramaphosa ngokusho kombiko wephephandaba.
“Kunabathile ababesebenza kanzima ngesikhathi sokhetho lwangowezi-2014 nolwezi-2016, kodwa manje asebecwilile. Kuyacaca ukuthi kunabantu ababezihlanganise nalo mbutho ngenxa yokuthola izikhundla.”
UMantashe uphinde wakugcizelela ukuthi ukuba sohlwini nokuthi ukuyiphi indawoo akusho ukuthi usuzothola isikhundla.
“Ikhabhinethi ayiqokwa ngokuthi umuntu ukuphi ohlwini. Akubona abokuqala abalishumi abangena kukhabhinethi, kodwa kuya ngokuthi uMengameli ubani afuna ukusebenzisana naye, nokuthi ikhabhinethi isibalo sayo sisazokwehliswa kusamile,” kugcizelela uMantashe. Wengeze ngokuthi uKhongolose uyithathela phezulu indaba yokuphawula komphakathi novo lwawo ngezinto ezithinta umbutho.
“Into i-ANC engeke iyenze ukuziphathisa okwenhlangano engathi ingcwelengcwele noma iyizingelosi, ekubeni kuyinhlangano yabantu. Into edingakalayo manje kuKhongolose ukuba ithathe izinqumo ngendlela ezoyenza yamukeleke emphakathini kodwa ngokulandela umthetho, uma isiyenze njalo kuzoba ongaphansi nongaphezulu okuyinto okumanje ibonakala yenzeka ohliwni lwamagama abaya ePhalamende naseziShayamthetho zezifundazwe,” kugcizelela uMantashe.
Uphonsele inselelo IKhomishini Ezimele Yokhetho ukuba ibhekane nalabo abanamacala noma amagama abo anogcobho zingafi ngamvunye. “Uma kuwukuthi kukhona okubambekayo noma okwake kwavela eNkantolo Yomthethosisekelo ngalowo muntu, noma ngabe i-ANC iyathalalisa ekuthatheni isinyathelo kodwa iKhomishini Ezimele Yokhetho inomthwalo wokulandela ukuthi yini eyenzekayo ngalowo muntu futhi ithathe nesinqumo ngokushesha. INkantolo Yomthethosisekelo yathola ukuthi uNkk uBathabile Dlamini akahambisanga ngendlela ekusingatheni udaba lokukhethwa kwenkampani eyayizokhokha izimpesheni ngesikhathi esenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi. Le Nkantolo yanquma ukuthi akakufanele ukuphatha isikhundla esikhulu kangaka futhi nangesikhathi esizayo akumele aphathe isikhundla. Yaphinde yenza izincomo zokuba uMengameli amthathele izinyathelo. Kwaba nesikhalo esikhulu emaqenjini aphikisayo ngesikhathi uMengameli uRamaphosa emqoka njengoNgqongqoshe Wabesifazane. Kukhona ukukhuluma okuthi uNkk uDlamini uphethe isikhundla esikhulu kuKhongolose njengoba enguMengameli Wophiko Lwabesifazane, iWomen’s League ngakho akukwazi ukuthi angasala kukhabhinethi futhi usesigungwini esiphezulu kule nhlangano. I-ANC imile ekutheni angeke ifakwe ingcindezi ngamaqembu aphikisayo nawo anezinkinga zawo, kodwa izolandela uhlelo oluvulelekile futhi ayikwazi ukuthi ingalahla umuntu ngecala inkantolo ingakanqumi ngaye. Uma kungaya ngokuthi wonke amagama abaholi abanogcobho ayahoxiswa naye uMengameli uRamaphosa angaba ngaphansi kwengcindezi emuva kokuvela kobufakazi bokuthi indodana yakhe u-Andile Ramaphosa yakhokhelwa inkampani iBosasa imali eyizi-R2 million ekubeni ngaphambilini wayeveze ukuthi yena wazi izi-R500 000 kuphela.
Thola elaboHlanga ku-email yakho
Awakhunjulwe awakuleli asala eCentral African Republic
Uyadunguzela uMsunduzikuphazamisa ukuba iMetro